Fanavaozana ofisialy ny Nosy Cayman momba ny coronavirus COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fanavaozana ofisialy ny Nosy Cayman momba ny coronavirus COVID-19
Fanavaozana ofisialy ny Nosy Cayman Islands amin'ny COVID-19
Na dia tsy nisy valiny notaterina nandritra ny 21 aprily 2020 Covid-19 fanaovan-gazety, amin'ny tompon'andraikitra Fanavaozana ny Nosy Cayman, Lehiben'ny mpitsabo Dr. John Lee amin'ny antsipiriany izay tafiditra ao anatin'ny onjam-panadinana voalohany. Mandritra izany fotoana izany, ny Andriamatoa Governora dia nanome antsipiriany bebe kokoa momba ny ekipa mpanohana ny miaramila, sivily ary logistika tonga avy any UK amin'ny herinandro ambony.
Premier, Hon. Alden McLaughlin, nametraka ny fandaminana ny fivorian'ny Antenimieram-pirenena amin'ity herinandro ity ary niresaka tamin'ny Caymanians monina any ampitan-dranomasina. Manaraka izany, ny minisitry ny fahasalamana dia nanome fanavaozana ireo fitaovana vao nahazo asa vaovao tany amin'ny hopitaly Cayman Islands.
Lehiben'ny mpitsabo Dr. John Lee
Tsy misy valiny mahazatra ankehitriny, ary ny toe-pahasalaman'ireo olona notaterina omaly dia mitohy tsy miova.
Ny milina ao amin'ny Fahefana misahana ny fahasalamana dia eo am-piomanana amin'ny fikarakarana sy ny kalitao.
Natomboka ny fanandramana manitatra ny mpiasa eo aloha. Ny onja voalohany tamin'ity fitsapana ity dia misy: ny fidirana hopitaly rehetra ankehitriny; ny mpitsabo marary rehetra ankehitriny; ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra; na iza na iza manana soritr'aretin'ny taovam-pisefoana na amin'ny tolo-kevitry ny matihanina amin'ny fahasalamana; gadra sy mpiasan'ny fonja eo aloha.
Ny programa fanandramana nitarina dia hitombo amin'ny fotoana mety. Mitohy ny fihenan'ny antso hotline flu: misy 16 ny antso omaly ary enina ny mpanatrika ny tobin'ny gripa.
Tombanany ho tranga 1,000 no hosedraina mandritra ny tapa-bolana voalohany amin'ny fomba fitiliana misimisy
Kaomiseran'ny polisy, Andriamatoa Derek Byrne
Tsy misy olana lehibe amin'ny natiora polisy mandritra ny alina.
Nisy fanelanelanana folo nitranga tao Cayman Brac tao anatin'ny indray alina, ary tsy nisy ny tatitra momba izany. Tamin'ny Grand Cayman nandritra ny alina dia fiara 341 no nosakanana, ary olona iray no hita fa nivadika ary nampitandrina ny amin'ny fampanoavana; nanomboka tamin'ny 6 maraina androany dia be ny fifamoivoizana. Olona iray no hita fa nanitsakitsaka ny toeram-pialofana amin'ny lalànan'ny toerana ary nomena tapakila.
Nisy medevac tonga tamim-pahombiazana avy tany Little Cayman, saingy tsy misy ifandraisany amin'ny COVID-19 izany.
Nisy ny fampahatsiahivana fa miverina amin'ny 7 hariva ka hatramin'ny 5 maraina rahampitso ny curfew henjana; ny fanatanjahan-tena dia avela eo anelanelan'ny 5:15 maraina ka hatramin'ny 6:45 hariva; Mbola ao anaty hidy mafy ny morontsiraka.
Ireo tompona orinasa misy fandaminana fiarovana manokana dia tokony hampiasa ireo rafitra ireo hanamarinana ao amin'ny trano misy azy ireo. Ireo tompona tsy misy filaminana manokana dia tokony hifandray amin'ny polisy handamina ny fizahana.
Ny delegasiona miaramila UK dia hiara-miasa amin'ny RCIPS rehefa tonga izy ireo, arakaraka ny fizotry ny vanim-potoana alohan'ny rivodoza.
Ny praiminisitra Hon. Alden McLaughlin
Ny Antenimiera mpanao lalàna dia miomana amin'ny fivoriana izay hanomboka rahampitso ary hitohy amin'ny alakamisy.
Ny fivoriana rahampitso dia natao mba hiantohana ny fanarahan-dalàna amin'ny halaviran'ny fiaraha-monina: mpikambana voafidy enina ao amin'ny governemanta no ho tonga, miampy ny Lehiben'ny Fampanoavana ary ny mpitarika ny mpanohitra. Mpikambana mpanohitra iray sy mpikambana tsy miankina roa no hanatrika izany ary mpikambana iray ao amin'ny mpanohitra no handray ny seza.
Ny fivoriana rahampitso dia hanitsy ny kaomandy maharitra, ka ny fivoriana lehibe ataon'ny trano dia afaka atao amin'ny alakamisy amin'ny alàlan'ny elektronika mba hisafidianana solombavambahoaka lefitra, hanovana ny mpikambana ao amin'ny Komitin'ny Orinasa ary hanaovana fanitsiana ny lalàna, araka ny efa nambara mialoha.
Ny Caymanians monina any ampitan-dranomasina koa dia niresaka ary nampahatsiahy fa miahiahy azy ireo ny governemanta ary manasoa azy ireo.
Nisaorana ny CIGO-UK tamin'ny asan'izy ireo, nanampy ireo Caymanians tany UK sy tany Eropa. Ohatra amin'izany ny fiantsoana Zoom isan-kerinandro, ary koa ny fiantsoana fandrahoan-tsakafo Zoom manome sakafo manome ny saran-dàlana eo an-toerana miaraka amin'ireo akora sasany nosoloina famoronana.
Dia nirary an-dRamatoa Ethel Ebanks, fiverenana soa aman-tsara maro tamin'ny tsingerintaona faha-102 taonany androany. Nanamafy izy fa tena tiana izy, ary ho an'ny olona toa azy dia tsy maintsy mijanona ao an-trano isika ary miaro ny fiarahamonina. Niresaka ny ohabolana iray izy izay milaza fa "isaky ny maty ny anti-panahy, mirehitra ny trano famakiam-boky" ary nampahatsiahy antsika fa sarobidy sy sarobidy koa ny fiainana rehetra.
Andriamatoa Governora Andriamatoa Martyn Roper
Ny sidina fiaramanidina britanika British Airways faharoa dia ho tonga ny talata 28 aprily ary hiainga ny Alarobia 29 aprily amin'ny 6.05 hariva, ary hijanona kely any amin'ny Nosy Turks sy Caicos mba hanangona mpandeha izay hiverina any Londres.
Ny sidina dia hitondra kitapo fitrandrahana sy swab, ary koa caymanianina maromaro hiverina any amin'ireo nosy.
Ireo rehetra izay nisoratra anarana tamin'ny alàlan'ny laharam-pitaterana dia handefa rohy mankany amin'ny tapakila famandrihana.
Avela handeha ny biby fiompy ary omena ireo misoratra anarana ny antsipiriany.
Araka ny voalaza omaly, ny sidina dia hitaterana ekipa kely iray avy any Angletera ihany koa, sahala amin'ilay efa napetraka ao amin'ny TCI.
Milamina ny raharaha lalàna sy filaminana ary matoky ny Governemanta ny fahafahan'ny Cayman Islands mitantana risika. Fa ny zava-misy ankehitriny tsy mbola nisy toa azy; ity ekipa miaramila, sivily ary logistika kely ity dia hanome fanohanana, fahaizana ary loharanom-pahalalana mba hahay hitantana ny risika toy ny fikirakirana ny curfew, ny fonja, ny toekarena ary ny lafiny sosialy.
Ny ekipa koa dia hanampy amin'ny fiomanana amin'ny rivodoza, hiara-miasa amin'ny Hazard Management Cayman Islands, ary hiara-miasa amin'ny fananana UK hafa. Izy io dia hisy mpandrafitra fitsaboana sy fiarovana miaraka amin'ireo logistianina.
Ity fametrahana ity dia famantarana matanjaka an'ny fanohanan'ny UK ny Nosy Cayman ary ny rezimanta fiarovana ny Nosy Cayman dia hiara-hiasa akaiky amin'ireo olona vao tonga.
Ny Majesty the Queen dia naniry koa ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana.
Minisitry ny fahasalamana Dwayne Seymour
Niangavy ny olona tsy hisintona vola amin'ny fisotroan-dronono manokana izy raha tsy ilaina izany. Notanisainy ho toy ny sokajy misy filàna tena mila miditra amin'ny fisotroan-drononony ny olona toy ny tsy an'asa, na ireo miasa amin'ny fizahantany.
Nidera ireo fepetra fanandramana nisesisesy izy.
Ny laboratoara any amin'ny Nosy Cayman dia misy milina PCR (valiny polymerase chain) efatra: telo ao amin'ny HSA, ao anatin'izany ny iray vaovao hotendrena, ary ny iray ao amin'ny Hopitaly Dokotera. Manana kabinetra biosafety enina koa izy ireo afaka mizaha ny COVID-19 manerana ireo hopitaly telo, ny roa dia vaovao ary tsy ho ela dia hotendrena.
Ny sarontava dia nomena ny mpiasa marobe, anisan'izany ny polisy sy ny mpiasan'ny fonja. Ny tanjona dia ny hahatonga ny Vokovoko Mena hanao sarontava 4,000, ary amin'ity fitambarany ity dia 350 no efa nozaraina tamin'ny herinandro lasa. Nisaorana ireo mpilatsaka an-tsitrapo an'ny Dr Lee sy ny Vokovoko Mena noho ny fanohanany ity hetsika ity.
Ny sarontava dia fiarovana fanampiny, saingy ilaina ny fanalavirana sosialy enina metatra. Ny mijanona ao an-trano no mijanona ho fomba tsara indrindra hiarovan-tena.
Fandraràn'ny fifindra-monina Trump: tsy dia misy dikany loatra ny fiantraikan'ny fampiharana noho ny fiantraikany ara-politika
Fizahan-tany any Karaiba: Ataovy lohalaharana ny olona mandritra ny areti-mifindra COVID-19